Global Voices teny Malagasy · 28 Febroary 2014
Tantara tamin'ny 28 Febroary 2014
Azia Atsinanana28 Febroary 2014
Mpikorisa an-dranomandry Rosiana Adelina Sotnikova no nahazo ny medaily volamena tamin'ny fifaninanana fikorisana an-dranomandry hoan'ny vehivavy, saingy tsy ny Koreana Atsimo ihany no tsy natoky izany voka-dalaoa izany fa maro
Los Inestables: Jery todika Ny Lasa, Miroso Ho Amin'ny 2014
Mediam-bahoaka28 Febroary 2014
Nanatontosa lanonana farany taona tao an-tanànan'i Córdoba, ao Arzantina ny tetikasa nahazo vatsy 2013 tamin'ny Rsing Voices, ka nanatontosa fandraketam-peo ny sasany tamin'ireo mpandray anjara ary nizara izay fahaizana noratovin'izy ireo nandritra ny taon-dasa sy ny fanantenan'izy ireo amin'ny taona hoavy.
Ankona Sy Mitsiriritra Eo Ampijerena An'i Okraina I Iran
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Febroary 2014
nahatsiahy ny revolisiona nikarakarana fihetsiketsehana goavana indray mandeha tamin'ny 2009 ho fanoherana ny fitondrana ao amin'izy ireo izay tsy nahomby tao amin'izy ireo kosa ny Iraniana.
Mbola Tsy Nisoratra Anarana? Ampidiro Ny Bilaoginao Amin'ilay Fifaninanana BilaogyTsara Indrindra (Bobs)
Lanonana28 Febroary 2014
Misokatra indray hoan'ireo bilaogera manoratra amin'ny teny efatra ambinifolo isan-karazany sy sokajy marobe ny fifaninanana fanao isan-taona karakarain'ny Deutsche Welle. Ny fifaninanana - Best of Online Activism (Fikatrohana Antserasera Tsara Indrindra) - dia mikendry hampiroborobo ny fahalalaham-pitenena sy ny fanajana ny zon'Olombelona ao amin'ny Aterineto sy manerana izao tontolo izao.
Mitendry Aho, Avy Eo Manoratra Amin'ny Tenim-paritra
Manerantany, tsy hita ao anatin'ny tontolon'ny teknolojia sy ny finday ny teny ifandraisana (lingua franca) sy ny tenim-paritra izay be mpiteny indrindra noho ny teny ofisialy
Afrika Mainty28 Febroary 2014
GV Face: Ankoatra ny Gangnam Style – Ny Fanapenam-Bava Sy Ny Mozika Pop Koreana
Korea Atsimo28 Febroary 2014
Nantsoina hoe “fanondranan'entambarotra lehibe indrindra” ao Korea Atsimo. Lahatsary be mpijery indrindra ao amin'ny Youtube ny hira K-pop Gangnam an'ny PSY. Saingy ambadiky ny rendrarendra sy ny karama misavovona, tsy fahafinaretana avokoa izany rehetra izany rehefa manao ny asany ireo mpanasivana ao Korea Atsimo. Miresaka amin'ilay mpamoaka lahatsoratra amin'ny teny...
Amerika Latina28 Febroary 2014
Niresaka momba ny Lalao Olaimpikain'ny Ririnina faha 22 mialoha ny hanombohan'ny lalao tamin'ny 7 Febroary 2014 ny aterineto Rosiana. Fantatray tamin'ny alàlan'ireo mpitoraka bilaogy Rosiana izao fa ity no lalao Olaimpika lafo indrindra teo amin'ny tantara. Tsy gaga izahay raha toa ka niala ny iray amin'ireo boribory dimy famantarana ny...
Lozam-Piaramanidina Tany Nepal : Maty Daholo ireo Mpandeha 18
Azia Atsimo28 Febroary 2014
Betsaka ny lozam-piaramanidina ao amin'ny fitaterana an'habakabaka Nepale tao anatin'ny taona vitsivitsy, fianjerana fiaramanidina mahatsiravina roa isan-taona no hita nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2012.